Indonezia: Hafanana Ateraky ny Amboara Eran-tany & Bilaogin’ny Minisitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2018 16:03 GMT
Na dia tsy mahatratra ny dingana farany amin'ny Amboara Eran-tany amin'ny Baolina Kitra/'Soccer’ mihitsy aza i Indonezia taorian'ny fahaleovantenany tamin'ny taona 1945, ny soccer foana no fanatanjahantena malaza indrindra ao amin'ny firenena. Noho izany, tsy mahagaga raha toa ka manokana lahatsoratra iray na roa ireo bilaogera Indoneziana ho an'ity hetsika eran-tany malaza indrindra ity, izay atao ao Alemaina amin'izao fotoana izao.
Iwan izay manome torolàlana amin'ny fomba hanarahana tsy misy fahitalavitra ny vaovao mikasika ilay hetsika ho an'ireo sahirana amin'ny asany. Raha toa kosa ka manome fandrakofana ”mivantana” avy any Alemaina ho an'ireo mpamaky azy tsy tapaka i Agus Setiawan izay toa manao fanadihadiana any Alemaina amin'izao fotoana izao. Mamarana ny lahatsorany amin'ity filazàna manaraka ity izy:
Zavatra iray hafahafa tsikaritro anefa ny momba ny toetrandro. Talohan'ny Amboara Eran-tany, nandrahona, nanorana ary nangatsiaka kely ny andro. Mahagaga anefa fa andro iray nialoha ny nanombohan'ilay hetsika, niova tanteraka ho tsara be ny toetrandro taty Alemaina hatramin'izao. Toy ny hoe tia ilay hetsika goavana koa ny zavaboary. Toa tia ny lalao baolina kitra toy ny ankamaroan'ny vahoaka Alemana ny rahona sy ny orana ary ny hatsiaka ka tsy te hanelingelina ny zavatra tian'ireo Alemana sy izao tontolo izao jerena.
Tsy te ho tavela any aoriana ihany koa ireo Indoneziana sasany adalan'ny Teknolojia izay tsy namoaka lahatsoratra afa-tsy ireo mifandray amin'ny Teknolojia hatreo. I Hianoto, ohatra, nanao lahatsoratra lavabe (tamin'ny teny Bahasa Indonezia) mikasika ny fomba fankafizana irery ny fijerena ny Amboara Eran-tany.
Bilaogin'ny Minisitry ny Fiarovana
Farany saingy tsy kely indrindra, tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitra, te hanolotra ny bilaogy tantanan'i Juwono Sudarsono (rohy maty), Minisitry ny Fiarovana ao Indonezia aho eto (tamin'ny alalan'i Priyadi sy Enda). Vaovao tsara ho an'ireo bilaogera Indoneziana izany ary izy no Minisitra voalohany indrindra manana bilaogy. Nilaza tamin-kanihany ny mpaneho hevitra iray mitondra ny anarana hoe Anis tao amin'ny bilaogin'i Priyadi fa mety i Juwono no kandidà matanjaka indrindra ho lasa Minisitry ny Fiarovana ny Bilaogin'i Indonezia.